Oclean X Pro Smart cadayga - illow dhakhaatiirta Ilkaha | TeraNews.net
Oclean X Pro burushka cadayga ee caqliga leh - iska illow dhakhaatiirta ilkaha
qoraaga Nikitin Eugenius La daabacay 01.11.2021
Alaabooyinka summada Oclean uma baahna hordhac. Marka ay timaado wax soo saarka nadaafadda afka, astaantani waa kan ugu horreeya ee u soo gurmada. Soo-saareyaashu waxay ku guuleysteen inay isku daraan tignoolajiyada sare ee fudud ee isticmaalka, iyagoo siinaya iibsadaha alaabada qiimaha ugu fiican. burushka cadayga caqliga leh ee Oclean X Pro maaha mid ka reeban. Waxa ugu fiican ayaa ah in soo-saaraha uu sameeyay badeecad sax ah oo uu u suurtageliyay inuu ku iibsado qiimo gorgortan.
Oclean X Pro caday caqli badan - faa'iidooyinka
Dhab ahaantii, qiimo jaban ayaa ah faa'iidada ugu weyn. Waxaa intaa dheer, qaybteeda, astaanta Oclean ma laha tartamo badan. Hoos waxaad ku arki kartaa faahfaahinta adigoo isbarbar dhigaya Oclean X Pro, tusaale ahaan, astaanta Oral-B ee caanka ah.
Faa'iidooyinka cadayga caqliga leh ee Oclean X Pro:
Maamulka quruxda badan. Jiritaanka shaashad taabasho leh oo gees leh 0.96 inch ah xaqiiqdii maaha mid xad dhaaf ah. Waa maxay sababta aan loo siin mulkiilaha xakamayn dareen leh iyo bixinta hababka la doortay. Looma baahna in la riixo badhamada, doorashada hab ku habboon - wax walba waa mid aad u fudud. By habka, naqshadeynta burushka cadayga ma saameyn. Taa lidkeeda, Oclean X Pro wuxuu u eg yahay qalab mustaqbalka.
Nadiifinta ilkaha tayada sare leh. Matoorka aan burushka lahayn ee Maglev waxa uu awood u leeyahay in uu dhaqdhaqaaqo 42 daqiiqaddii. Taasi aad bay u badan tahay, xataa caday kasta oo koronto ah.
Nidaamka nadiifinta ilkaha smart. Oclean X Pro waxa uu leeyahay gyroscope-ka ogaan kara jihada dhaqdhaqaaqa, xagasha u janjeedha iyo cadaadiska burushka ee dhaldhalaalka iliga. Hagaag, tani waa dhab ahaan waxa aynaan waligeen ku arag burushka cadayga ee miisaaniyada.
Hababka nadiifinta badan. Samee xisaabta - 3 nooc oo nadiifin ah (joogto ah, nadiifin iyo duugis). Heerarka xoojinta 32 (oo ay la socdaan hababka hawlgalka - tani waa horeba 96 kala duwanaansho). Iyo 20 kale oo diyaarsan oo lagu sameeyay xusuusta burushka cadayga ee Oclean X Pro. Maaha xaqiiqo ah in mulkiiluhu uu isticmaali doono dhammaantood, laakiin wuxuu hubaal ka heli doonaa ikhtiyaar ku habboon inuu cadaydo ilkahiisa.
Madax-bannaani heer sare ah. Soo saaraha ayaa ku andacoonaya in burushka uu ku shaqayn doono 30 maalmood hal batari. Jid ahaan, waxay qaadataa 2 saacadood oo keliya in lagu dallaco batteriga. Xitaa nadiifinta degdega ah, Oclean X Pro wuxuu ka sarreeyaa dhammaan tartamayaashiisa 2-3 jeer marka loo eego waqtiga hawlgalka.
Oclean X Pro burushka cadayga vs Oral-B iO 8
Qof ayaa sheegi doona inaadan is barbar dhigi karin alaabada soo saaraha Shiinaha iyo calaamad caan ah oo Jarmal ah. Waxayna noqon doontaa khalad. Marka la eego waxqabadka, Oclean ayaa ka sare maray tartame ka qaalisan Oral-B. Haa, waxaa jira cillado ku jira qorshaha bixinta. Tusaale ahaan, Oral-B iO 8 waxa ay la socotaa xarun dallacaadda birlabka ah oo waxa uu leeyahay saacad ku dhex dhisan oo leh tilmaam iftiin leh. Laakin in aad 2 jeer wax ka badan ku bixiso nuucyadan si uun bay qaali u tahay.
Soo saaraha Oclean X Pro (Shiinaha) Oral-B iO 8 (Jarmalka)
Nolosha hal lacag 30 maalmood 14 maalmood
Muujinta midabka Haa Haa
Xiriirka taleefanka gacanta Haa (raadinta nadiifinta buuxda) Haa
Hababka nadiifinta 3 (waxaa jira 20 qalab) 6
Heerarka xoojinta 32 1
Engineering Ultrasound Magnet
Caday qaabka madaxa Oval Goobaabin
Nadiifinta maalinlaha ah Haa Haa
Daryeelka cirridka Haa Haa
Nadiifinta Xirfadlaha No Haa
Nadiifinta afka No No
Tilmaamaha iftiinka ee nadiifinta saxda ah ( khaldan). No Haa
Saacadaha adoo isticmaalaya wakhtiga nadiifinta Haa Haa
Gariirka Haa Haa
qiimaha lagu taliyay $ 120 $ 300
Marka la eego astaanta Shiinaha ee Oclean, Oclean X Pro burushka cadayga ee caqliga leh waxaa la soo saaray dammaanad 2-sano oo rasmi ah oo soo saaraha ah. Tani waxay soo jeedinaysaa in shirkadu ay soo saarto alaab tayo sare leh. Iibiyuhu wuxuu alaab ka soo rari karaa bakhaarro ku yaal Poland ama Ruushka - tani waxay dammaanad qaadaysaa gaarsiinta degdegga ah ee alaabada iibsada.
Waxaad ka iibsan kartaa burushka cadayga ee Oclean X Pro link this on aliexpress... Waxaan kugula talineynaa isticmaalka kuubannada dhimista:
SPTOWH150 (dalbo in ka badan 690 rubles - 150 rubles qiimo dhimis).
SPTOWH250 (dalbo in ka badan 1290 rubles - 250 rubles qiimo dhimis).
SPTOWH350 (dalbo in ka badan 1990 rubles - 350 rubles qiimo dhimis).
SPTOWH450 (dalbo in ka badan 2690 rubles - 450 rubles qiimo dhimis).
SPTOWH600 (dalbo in ka badan 3490 rubles - 600 rubles qiimo dhimis).
SPTOWH800 (dalbo in ka badan 4890 rubles - 800 rubles qiimo dhimis).
Bolts Smart Screw Connection oo leh Wi-Fi
Starlink waxay bilawday adeegga la qaadi karo ee baabuurta
Microsoft Open Source 3D Filim Sameeyaha
ASUS GeForce RTX 3080 10GB Noctua Edition kaadhka garaafyada
Apple, Google iyo Microsoft waxay ka soo horjeedaan Xeerka Xuquuqda Dayactirka
Dune HD RealBox 4K Box Box: Worth iibsashada
MiTo MT3 Noctua Keycap Set - oo qarka u saaran iskaashi cusub
Waa maxay Wi-Fi 6, maxaa loogu baahan yahay maxayse yihiin rajooyinka